Tower mangatsiaka mihidy: orinasa indostrialy
Zava-dehibe eo amin'ny sehatry ny fivarotam-panafody ny tsingerina ara-pahasalamana, noho izany dia mila fitaovana isika hanala ny hafanana tsy ilaina amin'ny fizotrany na hamindra ny hafanana amin'ny haino aman-jery hafa hampiasaina bebe kokoa.
Ny fifanakalozana hafanana dia ampahany lehibe amin'ny fizotry ny famokarana fanafody simika sy simika tsara. SPL manaoTilikambo mangatsiaka, Cooler Hybrid ary condenser evaporative Ny fitaovana dia natao hiasa amin'ny toetry ny fahadiovana optimum ary mifanaraka amin'ny fanao amin'ny famokarana tsara. Mila mifintina sy mahomby izy io, nefa mora diovina sy tazonina. SPL isan-karazany ny vokatra manatanteraka ireo fepetra takiana sy bebe kokoa. Ary koa ny fiantohana fiasa azo antoka, ny vahaolana dia manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny hafanana mba hahatonga ny fizotrany ho ara-toekarena kokoa.
Ny sasany amin'ireo fizotran'ny zava-dehibe amin'ny pharmaceutika izay mila rafitra fanamafisana mahomby:
•Fanodinana batch amin'ny réacteur multipurpose, izay mitaky rano mangatsiaka ho an'ny fanehoan-kevitra simika amin'ny mari-pana avo lenta ary ny fametahana ny vokatra farany amin'ny mari-pana ambany
•Menaka fanosotra alohan'ny handrarahana sy fonosana
•Fifehezana ny mari-pana amin'ny fizotran'ny famolavolana rehefa mamorona gelatin ho an'ny kapsily.
•Fanamainana sy fanamafisana ny singa manaraka ny menaka alohan'ny hifangaroany
•Fanafanana sy fampangatsiahana mandritra ny fanamorana ny fanafody fanafody ranoka
•Rano ampiasaina amin'ny fizotran'ny granulation mando ho an'ny fananganana takelaka